WARBIXIN: Barcelona Oo Dejisay Qorshaheeda Suuqa Ee Bisha January & SADDEXDA Xiddig Ee Camp Nou La Keenayo - Gool24.Net
WARBIXIN: Barcelona Oo Dejisay Qorshaheeda Suuqa Ee Bisha January & SADDEXDA Xiddig Ee Camp Nou La Keenayo
Kooxda Barcelona oo aan qaabkii ugu fiicnaa waxba uga qabsan suuqii xagaaga ee dhawaan xidhmay ayaa la xusayaa inay haatanba sii dejisatay qorshaheeda suuqa bisha January iyagoo saddex xiddig oo ay doonayaan sii tilmaansaday.
Saddexda ciyaaryahan ee looga gacan haadinayo Camp Nou ayaa kala ah Georginio Wijnaldum oo Liverpool ka tirsan, weeraryahanka Lyon ee Memphis Depay iyo da’yarka daafaca dhexe ee Manchester City ee Eric Garcia.
Barca ayaa dhammaan saddexdaas ciyaryahan suuqa ka doonaysay kahor intii uusan rasmi u furmin xilli ciyaareedkan 2020-21 balse Lyon, Man City iyo Liverpool ayaa dhammaantood meel adag ka istaagay iibkooda.
Sida uu hadda sheegayo wargeyska Mundo Deportivo Barcelona ayaan wali ka rajo dhigin doonistooda saddexdaas ciyaaryahan waxaana ay markale u kuur geli doonaan January maadaama xilligaas kaliya min lix bilood ay saddexdooda heshiisba ka hadhsanaan doonaan oo ay arrimuhu fududaan karaan.
Depay oo kamida xiddigaha hoggaanka u ah kooxda ree France ee Lyon ayaa dhawaan diiday inuu meesha ka saaro fursada uu ugu wareegi karo Barcelona bisha January isaga oo sheegay inay u badantahay in kooxo badani ay soo dalban doonaan.
Dhinaca kale Eric Garcia ayaa Manchester City toos ugu sheegay inuusan heshiis kordhin u samayn doonin oo uu doonayo inuu ku laabto Barca oo uu akaademigeeda kusoo jiray 2008 ilaa 2017.
Ugu dambayn, Wijnaldum ayay u badantahay inuu noqon doono ciyaaryahanka ay ugu adagtahay in la helaa maadaama oo tababarihiisa Jurgen Klopp ay ka go’naan doonto inuu inta xilli ciyaareedka ka dhiman sii haysan doono xilli uu doonayo inay Premier League difaacdaan.